April 4, 2022 – KIC
UncategorizedBy Pae Myar April 4, 2022
The Kayah State Investment Committee (KIC) holds meeting of (1/2022)
Meeting, News, Uncategorized, Uncategorized, News, MeetingBy Pae Myar April 4, 2022
The Kayah State Investment Committee (KIC) meeting (1/2022) was convened at the meeting room of Kayah State Government Office on 8th March, 2022 in Loikaw. The meeting was chaired by U Zaw Myo Tin, Chairman of Kayah State Investment Committee and the members of KIC were attended. During the meeting, they discussed the situation of…
စိမ်းလန်းဟန်မင်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ငုရွှေဝါ မြေယာရှုခြင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဆန်းသစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် သို့ ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ခြင်း
ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ကယားပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ၏အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရှိ စိမ်းလန်းဟန်မင်းအောင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ ငုရွှေဝါ မြေယာရှုခြင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ဆန်းသစ်ဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့သို့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါသည်။
Field Inspection Service to Sein Lann-Han Min Aung Co.,Ltd., Laburnum Landscaping Co.,Ltd. and San Thit Oo International Co.,Ltd.
Inspection, News, Inspection, NewsBy Pae Myar April 4, 2022
Officials from Kayah State Investment Monitoring Team provided field inspection service to Sein Lann-Han Min Aung Co.,Ltd., Laburnum Landscaping Co.,Ltd. and San Thit Oo International Co.,Ltd. under Kayah State Investment Committee endorsements in Loikaw Township on 17th March, 2022. During the providing service, the team coordinated for the requirements of those projects.